“भगवान शिव महादेवको दर्शन गरि मंसिर ८ गते/नोभेम्वर २३ सोमबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ राशिफल हेर्नुहोस “ – Krazy NepaL
November 23, 2020 1180
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल मंसिर ८ गते सोमबार ई. सं. २०२० नोभेम्वर २३ नेपाल सम्बत ११४१ कछलाथ्व नवमी, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, कार्तिक शुक्ल नवमी, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा, शतभिषा नक्षत्र, हर्षण योग, बालव करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०६ः३१ बजे, सूर्यास्त साँझ ५ः१० बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको कुम्भ राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा आफ्नो पुरा शरिर ऐनामा हेरेर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आज कुष्मान्ड नवमी व्रत परेको छ । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ६ बजरे ३१ मिनेट देखि ७ बजेर ५१ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
(मेष )चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
मन फुरुङ्ग हुनेछ । आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ । कलकारखाना र बन्दव्यापारमा फाइदा हुनेछ । शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । धार्मिक सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउने छन । लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।
(बृष )इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
(मिथुन) का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
(कर्कट) हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
(सिंह) मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे
(कन्या) टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
(तुला) र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
मुखमा सरस्वतीको बास भएको दिन हो, त्यसैले महत्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ । आजको चिन्तन र उपायले काम गर्नसक्छ । आम्दानीका मार्गहरू खल्ला रहने छन । मानसम्मानमा बृद्धि हुनेछ । बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन । प्रेम र प्रणयतर्फ आकर्षण हुनसक्छ । प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजय मिल्नेछ ।
(बृश्चिक) तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
)कामधन्दा र प्रयासमा ढिलो गरी सफलता पाउन सकिने छ । घरगृहस्थीमा धेरै समय खर्चनु पर्ने योग छ । आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ । छोराछोरीको स्वास्थ्य एवं पढाइप्रति जिम्मेवारी बोध हुनेछ । मातापितासँगको सम्बन्धमा समेत निराशा भाव आउनसक्छ । डुबेको धन उकास्न दौडधूप गर्नुपर्छ ।
(धनु) ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
(मकर) भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
(कुम्भ) गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन । खानपिनका परिकार प्राप्त हुने र भ्रमण, पर्यटन, रमझम तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनु पर्नेछ । धार्मिक र सामाजिक काममा मन जान सक्छ । दानपुण्यका क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ । घरपरिवारबाट साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन, तर मन दोधार नबनाउनु होला, नत्र तपाईंले तिनलाई पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुहुन्न । स्वास्थ्य अनुकूल हुनेछ । मित्र, परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन् । लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धननिवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्ने योग छ ।
(मीन) दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिने छ । पति पत्नीका बीचमाको सम्बन्धमा तितोपन देखिने छ । आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्छ । बन्दव्यापारमा मन्दी छाउने छ । समय र नियमको अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छन् । रातीअबेर केही अधुरा काम बन्न सक्छन । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ ।
(यहाहरुको दिन सुभ रहोस)
Prev“एउटा यस्तो ग्र’ह जहाँ पानीको होइन च’ट्टानको वर्षा हुन्छ अनि ला’भाको स’मुद्र छ”
Next“नेपाली मोडललाई नै मात खुवाउने सामाजिक सन्जालमा भाइरल बनेकी युबतिको हट तस्वीरहरु (हेरौ १२ तस्बिर सहित)”